13 ruux oo ku dhintay Qarax ismiidaamin ah oo goor dhowayd ka dhacay magaalada Beledweyne – Radio Daljir
13 ruux oo ku dhintay Qarax ismiidaamin ah oo goor dhowayd ka dhacay magaalada Beledweyne
Oktoobar 19, 2013 3:18 b 0
Beledweyne, October 19, 2013 – Qarax baaxad weyn isla markaasna ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa dhaliyey khasaare dhimasho oo aad u badan, sidoo kale waxaa jira dhaawac.
Qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah ayaa wararku sheegayaan in uu sababay geerida 13 ruux oo rayid ah iyo weliba dhaawaca tiro intaas ka badan, warar aan helayno ayaa intaas ku daraya in tirada dhimashada intaas ka badan karto.
Weerarka oo dhacay barqadii maanta ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha Qarxa, waxaa uu beegsaday goob makhaayado ah oo ay dad badan joogeen, balse ay ka agdhowaayeen Askari Soomaali ah iyo dhowr kale oo ka socday Itoobiya.
Dhaawacyada ayaa la dhigay cisbitalka guud ee Beledweyne oo haatan lagu dabiibayo, waxaa socda baaritaano ay wadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda, sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ay xaaladu magaaladu tahay mid kacsan.
Maamulka degmada iyo saraakiisha amaanka ee gobolka Hiiraan waxaa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan xaalada jirta, iyagoo sheegay in xaaladu magaaladu tahay mid kacsan, arrintan ayaa ku soo beegmaysa xili ay socoto qabanqaabada shirka lagu soo dhisayo maamulka cusub ee gobolka.
Xilibaanada federaalka ee Caabudwaaq jooga oo bulshada Galguduud ugu baaqay xasilooni (Dhegeysi)